I-Villa - Imigca yeBicheno - I-Airbnb
I-Villa - Imigca yeBicheno
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguStephen & Lindsay
Imigca yeBicheno ifumaneka ngqo ngaselunxwemeni lolwandle kunxweme olusempuma lwe-Tasmania. Ime kufutshane neziko ledolophu yaseBicheno, iivenkile zokutyela kunye neekhefi. Imigca yeBicheno inika iindwendwe indawo yokuhlala eneenkwenkwezi eziyi-4 kwenye yeeflethi okanye izindlu ezikwicomplex ezine eziziphekelayo.
Phola kwenye yeeflethi zethu
ezintle Yonwabela Izinto Ezinokonwatyelwa ezininzi ezahlukahlukeneyo
zaseBicheno Yonwabela iwayini nokutya kwale ngingqi
I-Villa yiflethi okanye indlu ekwicomplex entsha enendawo yokujonga ezantsi xa usiya elwandle. Inebhedi elala abantu ababini enendawo yokulala nekhitshi elipheleleyo.
Iintsuku eziyi-7 e Bicheno
Umbuki zindwendwe ngu- Stephen & Lindsay
Izimvo eziyi-3 218
Inombolo yomthetho: 2009/156